प्रदूषणले ९० प्रतिशतको मृत्यु « प्रशासन
प्रदूषणले ९० प्रतिशतको मृत्यु
२५ माघ २०७३, मंगलबार
ललितपुर । वार्षिक रुपमा विश्वभरि मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्यामध्ये ६५ लाख वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. खेम कार्कीका अनुसार एसिया क्षेत्रका देशमा प्रत्येक तीन मानिसको मृत्यु हुँदा दुई जना वायु प्रदूषणकै कारण हुने गरेको छ । प्रदूषण अधिक रुपमा विद्युत्भार कटौतीका समयमा हुने गरेको उनले बताए ।
विद्युत्भार कटौतीको समयमा चलाइने जेनेरेटरका कारण आउने धुवाँले वायु प्रदूषणमा वृद्धि भइरहेको जनाइएको छ । उक्त समयमा ५७ दशमलव ५४ प्रतिशत वायु प्रदूषण हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । उनका अनुसार वायु प्रदूषण मध्याह्नभन्दा बिहान बेलुका अधिकतम रहने गरेको छ । नेपालमा मात्रै बर्सेनि एक लाख ३६ हजार मानिसको प्रदूषणकै कारण मृत्यु हुने गरेको उनलेले बताए ।
प्रदूषणले मानिसको स्वास्थ्यमा गहिरो असर पारिरहेको बताइएको छ । यसबाट मुटु, दमखोकी र फोक्सोमा अधिकतम असर पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदूषणले ७२ प्रतिशत मुटु, १४ प्रतिशत दमखोकी र १४ प्रतिशत फोक्सोमा रोग लाग्ने गरेको छ । प्रदूषणकै कारणले निमोनिया रोगमा वृद्धि तथा ट्राफिक प्रहरीलाई पनि अधिक समस्या ल्याएको पाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वायु विशेषज्ञ भूपेश अधिकारीका अनुसार वायु प्रदूषणले मानिसको जीवनयापनमा थप चुनौती ल्याएको छ । यसले अकालमा बर्सेनि हजारौँ मानिसले ज्यान गमाउनु परेको उनले बताए ।
नेपाल जस्तो अविकसित देशमा प्रदूषण न्यून गर्न सम्बधित निकायको बेलैमा ध्यान नगए यसले दीर्घकालीन समस्या ल्याउनेमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गरे । प्रदूषण कम गर्ने उपायको खोजी गरेर समाधानतर्फ जानुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनका अनुसार मानिसले खोक्दासमेत वायु प्रदूषणमा असर देखिएको छ । खासगरी सडकमा गुड्ने यातायातका साधनबाट अधिक रुपमा दिनानुदिन वायु प्रदूषण वृद्धि भइरहेको उनको तर्क छ ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति प्रा. डा. जीवराज पोखरेलका अनुसार वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि राज्यले गर्ने लगानीमा वृद्धि गरिनुपर्छ । प्रदूषण न्यून गर्न नास्टले समेत समय समयमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताए । प्रदूषण नियन्त्रणम नागरिकलगायत राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । रासस
9 October, 2021 7:36 am
नेपालबाट बाहिरिन थाल्यो मनसुन, केही दिनमै पूर्ण रुपमा हट्ने
काठमाडौँ । यो वर्षको मनसुन औसतभन्दा केही ढिला गरी नेपालबाट
5 October, 2021 9:03 am
आजको मौसम : प्रदेश–२ का धेरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित पानी पर्ने
काठमाडौँ । आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भएर प्रदेश–२ का
4 October, 2021 7:27 am
आजको मौसम : केही प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज (सोमबार)
3 October, 2021 7:12 am
नेपालमा मनसुन अझै सक्रिय, भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ । नेपालमा मनसुन अझै सक्रिय रहेको छ । नेपालमा